Owayengumethuli we-OPW uveza izizathu ezamenza walaxaza lolu hlelo | News24
LAST UPDATED: 2019-01-22, 20:56
Owayengumethuli we-OPW uveza izizathu ezamenza walaxaza lolu hlelo
eGoli - Umethuli wezinhlelo kumabonakude uThembisa Mdoda usebhodlile ngokumenze washiya uhlelo oluyintandokazi ku-Mzansi Magic i-Our Perfect Wedding (OPW).
Le ntokazi ibikhuluma ohlelweni lukaGareth Cliff kuCliff Central lapho iveze khona ukuthi ophrojusa balolu hlelo bebengayazisi.
Ngokusho kukaThembisa, izinto zaqala ukubheda ngesikhathi benezingxoxo zokuvuselela inkontileka yakhe nethimba elihlela umsebenzi.
OLUNYE UDABA: BUKA: Kushaqeke ababukeli umethuli wohlelo equleka esteji
UThembisa uthi njengoba engusaziwayo ovelele futhi ofundile oneziqu kanye nezindondo ezibonisa umsebenzi wakhe omuhle, ubengazizwa njengomuntu ophathwa ngendlela efanele.
"Uma ngizizwa sengathi angibonwa futhi ngibona sengathi abasenandaba nami, ngizohamba. Ngesikhathi sinezingxoxo kwavele kwangicacela ukuthi ngidinga ukuhamba...njengomuntu owenza izifundo ze-drama futhi owuthandayo umsebenzi wakhe, ngeke ngiqambe amanga uma ngizizwa ngibukelwa phansi," kusho yena.
Le ntokazi ibuye yaveza okuhle okuyivelele kulolu hlelo kwaguqula impilo yayo.
"Bengiluthanda kakhulu loluhlelo. Lungenzele lukhulu njengomuntu wesifazane, njengesisebenzi kwezikaqedisizungu, futhi njengomama.
"Lungenze ngazizwa sengathi kumele ngenzele nabanye okuhle. Ngihlale iminyaka emibili kulolu hlelo nokuyinto engenze ngaba wumethuli oseluphathe isikhathi eside kunabo bonke futhi ngawina nezindondo ezintathu ngalo ngakho-ke ngibone ukuthi ukhona omunye odinga leli thuba ukuze lushintshe impilo yakhe naye," kuqhubeka yena.